Ungayinyanga njani iBetta Intlanzi yeeParasites | Ngeentlanzi
I-betta yintlanzi ethambekele kakhulu kwizifo okanye kwiipathologies ezingabeka impilo yentlanzi emngciphekweni, ezinye zizifo ezimbi Kulula ukunyanga njengee-parasites kunye abanye bafuna ukhathalelo olubanzi. Nangona into ebalulekileyo kukufumanisa uhlobo lomngundo ngexesha.
Njani ukuphilisa Betta iintlanzi? Kuqala kufuneka siqwalasele iintlanzi ukuze sikwazi ukubona iimpawu zesifo kwaye sikwazi ukusebenzisa unyango olufanelekileyo. Intlanzi ye-betta luhlobo olusebenzayo, ke ukuba siyabona ukuba umsebenzi wayo wehlile, sisizathu esaneleyo sokucinga ukuba into ayilunganga.
2 Usulelo lweBacteria
Iintlanzi zeBetta zixhaphake kakhulu kwifungus. Isikakhulu esi sifo sivela kuba iimeko zamanzi azilunganga okanye ngenxa yokuba iintlanzi bezikhe zanaso esinye isifo, ubukhulu becala inxeba, elonakalise intsholongwane yokukhusela kwintlanzi. Ukuba siyabona ukuba intlanzi igqunywe luhlobo lweenwele ezimhlophe kwaye ayisebenzi kakhulu, sinokuthi iyabandezeleka kuyo.
Ukunyanga ukungunda kufuneka sithenge kwi Ivenkile ekhethekileyo i-fungicide Ukuyifaka kwi-aquarium kwaye ke ubulale ukungunda okuhlala etankini. Ukwenza oku, kuqala kufuneka ucoce i-aquarium kwaye wenze utshintsho olupheleleyo lwamanzi.
Olu hlobo lwesidleleli kulula ukulufumanisa kwintlanzi ngokujonga nje ukuba umsila wayo omhle wonakele okanye balahlekile umbala wabo Singacinga ukuba inengxaki yosulelo lwebacteria okanye yaziwa ngcono sisidleleli esibolileyo esidla amaphiko kunye nomsila wentlanzi.
Ukubola kungafunyanwa ngenxa yokuba iintlanzi ziye zalwa nenye intlanzi kwaye isilonda asikaphilisi, nangona eyona nto ixhaphakileyo yile amanzi etankini akwimeko embi. Iintlanzi zeBetta zibuthathaka kakhulu kwaye indawo yazo yokuhlala kufuneka ihlale ikwimeko efanelekileyo.
Olu sulelo, ukuba alunyangwa ngexesha, lunokuqhubela phambili kulwakhiwo lweentlanzi lide ligqibe ukutya ibetta. Ukuze le nto ingenzeki, a Unyango lweekhemikhali kwi-aquarium ukuphelisa i-parasite.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izifo zentlanzi » Ungayinyanga njani i-betta fish ye-parasites